OnePlus 7T: qaabeynta, astaamaha iyo qiimaha taleefanka cusub | Androidsis
Si dhakhso leh looma odhan. Waan ogeyn taas OnePlus wuxuu soo bandhigi lahaa nooca fiitamiin ee OnePlus 7 si dhakhso leh, oo sidaasay noqotay. The OnePlus 7t durba waa xaqiiqo. Naqshad ku timaadda ujeeddo cad oo ah inuu noqdo dilaaga cusub ee shirkadda. Tan awgeed, waxay leedahay naqshad iyo astaamo farsamo oo dherer ah.
Sida aad ku arki karto sawirrada kala duwan ee la socda maqaalkan, soo saaraha Aasiya wuxuu ku daray faahfaahin qaar heer bilic leh, marka lagu daro agab aad u awood badan, si loo sameeyo kan cusub OnePlus 7t noqo ikhtiyaar tixgelin.
Naqshadeynta OnePlus 7t iyo astaamaha
Qeybta bilicsanaanta, waxaan ka helnay warar aad u xiiso badan. Bilawga, moduleka kamaraddu wuxuu leeyahay qaab wareegsan, oo raacaya qaabka qaar ka mid ah xalka Motorola. Intaas waxaa sii dheer, wejiga hore wuxuu soo ceshadaa nooca dhibcaha biyaha, halkii laga isticmaali lahaa nidaam mooto sida OnePlus 7 Pro.
Inta soo hartay, waxaan aragnaa in OnePlus 7T uu aad ugu egyahay kii ka horreeyay, in kasta oo shaashadda waxyar ka weyn tahay. Aan aragno qalabka qariya astaanta cusub ee shirkadda Shiinaha.
Faahfaahinta farsamada OnePlus 7T
Nidaamka hawlgalka Android 9
Screen 6.55 inji oo ah FullHD + xal (2.400 x 1.080 pixels) Dareere AMOLED 90 Hz iyo HDR10 + iyo 20: 9 saamiga
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 855+ oo leh 7nm iyo 2.96 GHz
Kaydinta gudaha 128 o 256
Kaamirada gadaal 48 megapixel f / 1.6 weyn oo leh OIS + EIS + 16 megapixel f / 2.2 xagal balaaran oo leh xagasha 117º + 12 megapixel f / 2.2 telephoto leh x2 zoom
Kaamirada hore 16 megapixels f / 2.0 leh EIS
Xuduudaha kala duwan WiFi 802.11 ac / Bluetooth / USB-C / Dual SIM / GPS / GLONASS
Tilmaamo kale Shaashada sawirka shaashadda / NFC / Aqoonsiga wajiga
Batariga 3.800 Mah oo leh 30W WARP Charge 30T
Cabbirada 60.9 x 74.4 x 8.1 mm
Qiimaha 489 euro oo loogu talagalay beddelka qaabka 128 GB / 515 euro ee isbeddelka qaabka 256 GB
Xaaladdan oo kale, sheekooyinka ugu waaweyn waxay la yimaadaan processor-keeda cusub ee Snapdragon 855+, jawharadda cusub ee taajkii soo saaraha Mareykanka, iyo sidoo kale nidaam muraayadaha saddex-geesoodka ah oo wax badan ballan qaadaya. Waa inaan sugnaa dib u eegistayada OnePlus 7t si aan u aragno sida ay wax u qabato, laakiin ujeedadeedu waa heer sare.
Qiimaheeda? Waxaa la filayaa inuu suuqa ku soo galo 489 euro oo loogu talagalay nooca 128 GB iyo 515 euro si loogu beddelo OnePlus 7t oo leh 256 GB. haa, kuwani waa isbeddelada qiimaha ee Hindiya, markaa waxay u badan tahay inay yihiin 499 iyo 550 euro siday u kala horreeyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » OnePlus 7T hadda waa rasmi, oo leh kamarad gebi ahaanba la cusbooneysiiyay
Android 10 Go wuxuu bilaabayaa deyrtan dhowr horumar